Progressive Voice Myanmar » Call foraTruly Independent Investigation into the Situation in Rakhine State
January 18th, 2017 • Author: 41 Myanmar Civil Society Organizations •3minute read
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို နားလည်သိရှိစေရန်၊ အမှန်တကယ်သီးခြား လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစ်ခုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတာင်းဆိုခြင်း။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင် လွန်စွာရှုပ်ထွေးလေးနက်သော လူ့ အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်ရသော အခြေအနေတင်းမာမှုများစွာတို့ ကို ရှင်းလင်း တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသော သဘောထားအမြင် ကွဲပြားခြားနားသည့် အခြေအနေလေ့လာသုံးသပ်ချက်များစွာ ရှိကြပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သော လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံတို့သည် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သော နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးတို့ ကို အခြေခံသော ခွဲခြားနှိမ့်ချမှုမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထို့ အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများသည် ရှည်လျားလှသော လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက် ဖြစ်ပေါ်နေသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစည်းများစွာတို့၏ အလေးထားမှုများနှင့်အတူ၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခန့်အပ်သော ရခိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ရှိခဲ့သော်ငြားလည်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအခြေအနေများသည် ပို၍ဆိုးရွားလာပြီး၊ တင်းမာမှုများစွာသည်လည်း ဆက်လက်၍ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော များစွာသောလူ့ အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကဲ့သို့ အခြားသောဒေသများတွင်း အလားတူကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြပါသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများသည် နိုင်ငံတကာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုတွင် အဓိကကျသဖြင့် အခြားသောဒေသများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော လူ့ အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများမှာ အလေးပေးဖြေရှင်းမှုများမှ အာရုံလွှဲခြင်းခံနေကြရပါသည်။ Furthermore, we believe the situation in Rakhine State presents an obstacle for the development of Myanmar, and we are concerned that the situation will create obstacles for the new government.
ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေအနေများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပြီး ၄င်းအခြေအနေသည် အစိုးရသစ်အတွက် အခက်အခဲများ ဖန်တီးမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စိုးရိမ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ အကြောင်းချင်းရာများနှင့်တကွ တခြားသော အကြောင်းများကြောင့်၊ အောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဖွဲ့ အစည်းများမှ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အခြေအနေမှန်များကိုလေ့လာနားလည်သိရှိစေရန် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်တကွ၊ အမှန်တကယ်သီးခြားလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ စည်း၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး၊ တိကျခိုင်မာပြတ်သားသော အကြံပြုချက်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိသော ပြဿနာများကို ထိရောက်သော အဖြေရှာဖွေမှု့ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ပြသနာများကို ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန် ကျွန်တော်တို့ မှ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
အမှန်တကယ် သီးခြားလွပ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြဿနာများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုကာ၊ မြန်မာပြည်သူတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် တစ်ကမာလုံးဆိုင်ရာအမြင်ကို ပြန်လည်ညှိယူနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။
ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ယေဘုယျအခြေအနေကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။
လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဖွဲ့ အစည်းများ
2. Action Group on Monitoring Communal Tension
3. Association of Human Rights Defenders and Promoters – HRDP
4. Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment (BRIDGE)
5. Burmese Women’s Union 6. C.T.U.M-Mandalay
7. Capacity Development Trainers Network (Mandalay)
8. Center for Youth and Social Harmony (CYSH)
9. Child Rights Working Group (Mandalay)
10. Chin Human Rights Organization (CHRO)
11. Coexist Myanmar
12. Election Observers Network – Mandalay (E.O.M-M)
13. Farmer Rights and Development Organization
14. Farmer Union (Magway Region)
15. Forum for Democracy in Burma (FDB)
16. Future Bright Library
17. Green Future Environmental Activities Group
18. Green Network Sustainable Environment Group
19. Hands of Unity Group
20. Human Rights Working Group (Myanmar)
21. Humanity Institute
22. Kachin Women’s Association Thailand
23. ME Community Development Center
24. Magway EITI Watch Group
25. Mandalay Social Network
26. Metta-Campaign (Mandalay)
27. Metta-Campaign – Youth (Mandalay)
28. Network for Democracy and Development (NDD)
29. Nyein Chan Yar
30. Organic Agro and Farmer Affair Development Group
31. People for People
32. Progressive Voice (PV)
33. Rainbow Organization (Singu-Township)
34. Smile Education and Development Foundation
35. Women’s League of Burma (WLB)
36. Women Peace Network-Arakan (WPNA)
37. Yangon School of Political Science (YSPS)
38. Youth Current Group
39. Youth Pacemaker Organization
40. Yway Lat Yar Institute
41. 88 Open-Society Committee (Mandalay)
Download this Statement in both English and Burmese HERE.